Kenya oo shaaca ka qaaday sir u qarsooneed Dowlada Ugandha oo ku aadaneed tirada Ciidamada Somalia looga dilay - iftineducation.com
iftineducation.com – Dowlada Dalka Kenya ayaa shaaca ka qaaday sir u qarsooneed Dowlada Ugandha oo ku aadaneed tirade Rasmiga ah ee Ciidamada Ugandha looga dilay gudaha Soomaaliya tan iyo markii ay gudhaa Soomaaliya soo galeen sanadii 2007-dii.
Richard Onyonka wasiir ku-xigeenka arrimaha dibedda Kenya oo ka hadlay Shir looga hadlayay Ciidamada AMISOM iyo wax qabadkooda oo ka dhacay Magaalada Nairobi ayaa sheegay in Ciidamada AMISOM ay naftooda u hureen badbaadinta Qaranka Soomaaliya Ciidamo badan oo AMISOM katirsana lagu laayay Gudaha Soomaaliya.
Wasiirka ayaa shaaca ka qaaday Tirada Ciidamada Ugandha looga dilay Gudaha Soomaaliya oo inta badan la qarin jiray waxa uuna sheegay in Ugandha gudaha Soomaaliya looga dilay Ciidamo gaaraya 2,700 (Labo kun iyo todobada Boqol oo askari) halka Ciidamada Kenya iyagana laga dilay tiro kayar 50-Askari sida uu Wasiirku sheegay.
Wasiir ku-xigeenka arrimaha dibedda Kenya ayaa intaa ku daray in Ciidamada AMISOM naftooda u hureen sidii dagaalyanada qatarta badan ee Al-Shabaab looga sifeyn lahaa gudaha Soomaaliya ,waxa uuna sheegay in howlgalkii AMISOM inta badan uu guuleestay isagoona beesha Caalamka ka codsaday in la taageero Ciidamada AMISOM.
Hadalkan kasoo baxay Dowlada Kenay ayaa laga yaabaa in uu dhaliyo qilaaf dhanka Diblamaasiyada oo ka dhax dilaaca Ugnadha iyo Kenya maadaama Dowlada Ugandha ay arintaan si aad ah u qarin jirtay in Ciidamo intaa la eg gudaha Soomaaliya looga dilay Balse Kenya ay markaan kashiftay Shaacana ka qaaday.